Somaliland oo soo Bandhigtay Ciidamo iyo gaadiid kasoo goostay dhanka…. | Allmareeg Online
Home Wararka Maanta Somaliland oo soo Bandhigtay Ciidamo iyo gaadiid kasoo goostay dhanka….
Somaliland oo soo Bandhigtay Ciidamo iyo gaadiid kasoo goostay dhanka….
Ciidamadii ugu badnaa oo watay gaadiidka nooca dagaalka kana tirsanaa Puntland ayaa ku biiray dhanka Somaliland, kuwaasi oo loogu soo dhaweeyay Degmo ka tirsan Gobolka Sool.
Ku dhawaad 150 Askari iyo Taliyahood oo Puntland uga howlgeli jiray deegaano ka tirsan Gobolka Sool ayaa xalay lagu soo dhaweeyay Degmada Taleex, kuwaasi oo Somaliland sheegtay inay kasoo goostay Puntland.
Wasiirka ayaa ugu horeyntii uga mahad-celiyay sida ay u doorteen inay u soo garab istaagaan Somaliland, isla markaana ay arkeen in uu dhacay gabalkii Puntland.
Weli ma jiro wax war ah oo kasoo baxay Puntland oo ku aadan Ciidanka la sheegay inay ka tirsanaayeen, kuwaasi oo u wareegay dhanka Somaliland, waxaana labada dhinac ka dhexeeya siyaasad dagaal oo aad u xun.
Previous articleMuxuu yahay Ajendaha Maanta ay ka doodi doonaan Xildhibaanada?
Next articleXiliga lasoo Gaba-gabeyn doono WD isku xirta Muqdisho & Afgooye oo la shaaciyay
Dacwad ka dhan ah C/Weli Gaas oo lagu wareejiyey xeer ilaaliyaha...
Aways Geedi - November 1, 2018 0
Saraakiisha ciidamada maamulka Puntland ee dhawaan uu shaqada uu ka ceyriyay madaxweyne C/Welli Maxamed Cali Gaas, ayaa sheegay inay dhawaan soo saarayaan warqad dacwo...